अश्वत्थामा वर्तमान राजनीतिको ऐना - Purwanchal Daily
१० माघ २०७७, शनिबार मा प्रकाशित
तपाईंद्वारा लिखित अश्वत्थामा कृतिलाई जयन्द्रप्रसाद प्रसाई साहित्य सेवा कोषको छनौट समितिले वर्ष कै उत्कृष्ट कति ठहर गरी पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको छ । तपाईंलाई कस्तो महसुस भएको छ ?
– आफूले लेखेको कृतिले सम्मान पाउनु आफैमा गर्व गर्ने कुरा हो । त्यस्ता कुराले कृति सिर्जना गरेर सम्मान पाउँदा सबैभन्दा बढी सो कृतिका लेखकले आफूलाई भाग्यशाली सम्झन्छन् । मेरो छैठौं कृतिका रुपमा ‘अश्वत्थामा’लाई सांग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरिदिएर कृतज्ञ तुल्याएकै थियो, अझ सो कृतिले साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले उत्कृष्ट ठानेपछि आफूलाई पनि कृति गहकिलो नै छ कि जस्तो भान भएको छ । ‘अश्वत्थामा’लाई उत्कृष्ट घोषणा गर्ने संस्थालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
महाभारत युद्धका पात्र अश्वत्थामालाई केन्द्रमा राखेर उनकै नाममा कृति लेख्ने प्रेरणा कसरी आयो ?
– महाभारत आफैमा एउटा संसार हो । त्यसभित्र भएका घटना र पात्रहरु नै हाम्रा समाजमा दोहोरिरहन्छन् । आफू फरक छु जस्तो लागे पनि त्यसैको वरिपरि हामी पनि हुन्छौं । कुनै पनि राज्य गठन र विघटन पनि सोही अनुरुपका पात्रका भूमिका अनुसार नै भइरहेका हुन्छन् ।
नेपाल पनि लामो प्रक्रिया पूरा गरेर विघटन उन्मुख त छैन ? भन्ने प्रश्न मनमा उब्जियो । त्यसले यो कृतिका लागि आधारभूमि तयार ग¥यो । देशमा जातीय आन्दोलन, ब्राह्मणप्रति अति वितृष्णा, राजनीतिले आक्रान्त नागरिक, वाह्य राज्यको देशभित्र अति चलखेल, देशभित्रका इमान्दार र राज्यप्रति उत्तरदायीहरुको हत्या, अनावश्यक विद्रोह लगायत कुराहरुको मदानीले पेलेर यो कृति सिर्जना गरेको हो । महाभारतका कुरामा ब्राह्मणहरुले भागेको अन्याय, दुर्योधनको इमान्दारिता र सत्यता, कृष्णको कुटिलता लगायतका कुरालाई आधार बनाएर वर्तमान राजनीतिक ऐना देखाउनुपर्छ भन्ने लागेर कृति सिर्जना हुन गयो ।
अश्वत्थामा कस्तो कृति हो, आम पाठकले यो पढेर के पाउँछन् ?
– ‘अश्वत्थामा’ कृति विशेषतः राजनीतिक घटना र परिघटनामा आधारित कृति हो । यो लीलालेखन उन्मुख छ । यो कृति समग्र ‘महाभारत’को ‘प्रतिलेखन’ कृति हो भन्दा पनि हुन्छ । यस कृतिले पाठकलाई हरेक घटनाका दुई पाटा हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ । हामी जहिल्यै पनि एउटा पाटो हेरेर धारणा बनाउँछौं । तर, आफूले देखेको भन्दा ठूलो पक्ष कहिलेकाहीँ अर्कोतिर छुटिरहेको हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । सत्यवादीहरु राजनीतिक घेराभित्र छिरेर कसरी मारिन्छन् वा पछारिन्छन् भन्ने पनि बुझ्न यसले सहयोग गर्छ । यसको गहन अध्ययन गर्नेले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र हाम्रो समाज विज्ञान बुझ्न पनि सहयोग गर्छ ।
अर्थात् यस कृतिले पुरातनवादी मान्यतालाई विनिर्माण गर्छ । एकालापको विरुद्धमा बहुअलावको सिर्जना गरेको छ । एक मूख्य पात्र र अरु सहायक पात्र जस्तो लाग्छ धेरैलाई हरेक कुरामा । तर, यसले बुझाउन खोजको कुरा भने हरेक पात्र आफैमा विशिष्ट छ । ऊ आफैमा एउटा पूर्ण पात्र हुन्छ । हामी पनि आफू–आफूमा पूर्ण पात्र हौं । कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ, म आफू अपूर्ण छु । त्यो पनि सत्य हो । तर, संसारमा अनायक कोही पनि छैन ।
अश्वत्थामा कृति लेख्दै गर्दा तपाईंले परिकल्पना गरेको अवस्था र कृति प्रकाशित भएपछि आएका सुझाव, हौसलालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
– यो कृति लेख्छु भनेर थालेपछि यसको अध्ययन गर्न झण्डै दश बर्ष लाग्यो मलाई । धार्मिक आस्था र मान्यताप्रति प्रहार भयो भन्ने समाज ठूलो बन्ने छ भन्ने डर थियो । धेरैभन्दा धेरै मैले गाली पनि खान्छु भन्ने लागेको थियो । तर, त्यस्तो केही भएन ।
कृति पढेर प्रतिक्रिया दिनेहरु कसैले पनि पनि कृतिमा यो गलत भयो भनेर भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म । एकदम रचनात्मक सुझाव प्राप्त भए । महाभारत पढेर र सुनेर खलपात्र लागेका पात्रहरु एकाएक नायक जस्तो देखिएपछि धेरै पाठकहरुका धारणाहरु परिवर्तन भएको पनि पाएको छु ।
लेखन यात्रामा अबको योजना के छ ?
– अहिले दुईवटा कृतिको लेखनको लागि अध्ययन र तथ्य संकलनमा जुटेको छु । एउटा झापाली राजनीतिको कडी सम्बन्धी पुस्तक छ भने अर्को बाउको मनोविज्ञानमा आधारित उपन्यास लेखनमा जुटेको छु । आउँदो साल ती दुबै पुस्तक तयार गरिसक्ने योजना छ ।
Previous articleतिमीले मलाई भुल्नै आँटेकी छ्यौ रे !
Next articleमहिला पनि ‘जक’ मुद्दामा कैद भुक्तान गर्दै